May 2021 - Celegroup
ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မနက်ဖြန်မှ စ၍ Facebook အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်နိုင်…(တကယ်ပိတ်မယ်ဆို VPN နဲ့လည်း ကျော်သုံးလို့ မရတော့ပါဘူး)
May 31, 2021 Celegroup1975 0
စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအား Whitelist ဖြင့်သာခွင့်ပြုမည်ဟူသောသတင်းများ မကြာမီက၊ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အသုံးပြုခွင့်ပေးသော App များတွင် Facebook၊ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိသည်ကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည် ။လတ်တလောတွင်လည်း Facebook အသုံးပြု၍ မရသည်အထိ ပိတ်ပင်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိသည် ။ Whitelist သဘောတရားနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများက အခုလို ပြောပြလာသည် ။Whitelist ကတော့ ပွင့်စေချင်တာကို ရွေးရတာပါ ။ ဥပမာ ပွင့်ချင်တဲ့ Military […]
လူတှသေိပျမသိသေးတဲ့ မန်တလေးနားက ဓါတျတျောတောငျ သဘာဝလှိုဏျဂူကွီး
ဓါတျတျောတောငျနဲ့ လှိုဏျဂူကွီးက ကြောကျဆညျမရောကျခငျ ဘယျလငျးရှာကနားမှာရှိတာပါ ၊ မနျးလေးကနသှေားရငျ တဈနာရီခှဲလောကျပဲကွာပါတယျဘယျလိုသှားရမလဲမနျးလေး – ကြောကျဆညျ လမျးအတိုငျးသှားရငျ ကြောကျဆညျမရောကျခငျလေးမှာ “ဘယျလငျးရှာ” ဆိုတဲ့ဆိုငျးဘုတျတှပေ့ါမယျ အဲ့ဆိုငျးဘုတျအလှနျ “နညျးပညာမွှငျ့တငျရေးသငျတနျးဌာနသို့” ဆိုတဲ့လမျးလေးအတိုငျး အရှထေဲ့တညျ့တညျ့ ၁၀ မိုငျလောကျ ထောငျတကျသှားရုံပါပဲ ၊ မနျးလေးကနေ ဘယျလငျးရှာကို ၁:၁၀ နာရီ ၊ ဘယျလငျးကနေ ဓါတျတျောတောငျခွကေို ၂၀ မိနဈ ပဲမောငျးလိုကျရပါတယျ ၊ ကားရော ဆိုငျကယျပါ တောငျခွထေိ […]
FB ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် စိတ်သဘောများနဲ့လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ရင်လေးစရာစရိုက်များ Fb ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ သူ့ချစ်သူမှန်း ကိုယ့်ချစ်သူမှန်း မသိဖြစ်လာတယ် သစ္စာတရား ကင်းမဲ့လာတယ် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ကွယ်လုဖြစ်လာတယ်။အိမ်ထောင်သယ်တွေကအပျို လူပျို လုပ်လာတယ် အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ကျောင်းကန်အရောက်နဲလာတယ် စကားတွေမပီကလာပီကလာပြောမှ ခေတ်မှီတယ်အသိနဲ့ သွားကျိုးကြားကလေထွက်သလို စကားကိုမပီအောင် တမင်လုပ်ပြောလာကြတယ် Post တင်တဲ့အခါ တင်တဲ့Postကို အသေအချာမဖတ်ပဲ ပါးစပ်အရသာခံ ချောချော မချောချော အသားယူပြောတဲ့သူတွေပေါလာတယ် လူတက်ကြီးလုပ်ပီး […]
နာမည်မှာ“သ” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား
နာမည်မှာသ”ပါတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား နာမည်မှာ သ ပါတဲ့သူတွေက စိတ်ကြီးတယ်ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်သူကိုမှဘယ်အရာကိုမှ ထည့်မစဉ်းစားဘူးထည့်လဲ မတွက်တတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ပြောပီး လုပ်ပီးသွားလို့သူမှားနေတဲ့ကိစ္စကိုလဲပြန်တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး။ စိတ်နာအောင်တော့ လာမလုပ်နဲ့သေတဲ့အထိ မှတ်ထားတတ်တယ်အငြိုးအတေးလဲ ကြီးတယ် အပေါ်ယံခင်မင်တာ မလိုလားဘူးသူငယ်ချင်း အစစ်ပဲ လိုချင်ကြတယ်ယောင်လို့တောင်နာမည်မှာ`သပါတဲ့သူကိုအရွဲ့မတိုက်မိစေနဲ့သူများတွေ ရွဲ့တာထက်အဆပေါင်းများစွာ ပြန်ရွဲ့တတ်တယ်။ သနားအောင်ပြောလာရင်အိတ်ထဲရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကိုယ် မသုံးရရင် နေပါစေပေးပြစ်တတ်တယ်မပေးချင်ဘူး ကြည့်မရဘူးဆိုရင်အဲ့လူဘာဖြစ်နေပါစေလှည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး လိမ်တာ ညာတာ အရမ်းမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အပေါ်မှာတော့ ဟာသတွေ ရယ်စရာတွေပြောပြီးစနောက်တတ်ကြတယ်အနေအေးတယ်။ […]
စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်း အချိန်မရွေးကြုံတွေ့လာနိုင်တာကတော့ ဖုန်း မှန်သားပြင် ကွဲသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်တာကြောင့် အသစ် တစ်လုံးနဲ့ ချက်ချင်းလဲဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဖုန်းမှန်ကွဲ နေပေမယ့် ဆက်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုလည်း ဒီ ဆိုးကျိုး လေးတွေ သိအောင် ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါဦး။ ဖုန်းမှန်ကွဲ ရာကနေ […]
မိနျးကလေး တဈယောကျအနဖွေငျ့တဈပတျကို ခေါငျးဘယျနှကွိမျ လြှျောသငျ့သလဲ…
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေဖြင့်တစ်ပတ်ကို ခေါင်းဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်သလဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့တစ်ပတ်ကို ခေါင်း ဘယ်နှကြိမ် လျှော်သင့်လဲဆိုရင် လူတိုင်းမှာ မွေးရာပါ အသားအရေ အမျိုးအစား မတူညီကြ သကဲ့သို့ ဆံသားအမျိုး အစားလည်း ကွဲပြားခြား နားကြပါတယ်။ (က) ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ဆံသား (ခ) ပုံမှန်(အလယ်အလတ်) ဆံသား (ဂ) ဆံသားအုံကောင်း (ဆံပင်ထူ) (ဃ) ခြောက်သွေ့ (မွဲခြောက်ခြောက်) ဆံသားဆိုပြီးတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဆံသားလေးမျိုး ရှိပါတယ်။ […]
မိဘတှကေို ပွုစုလုပျကြှေးခှငျ့ရတဲ့သူတှဟော အငျမတနျကံကောငျးတဲ့ သူတှလေို့ ဘာလို့ ပွောရတာလဲဆိုတော့ “မိဘတှကေို ပွုစုလုပျကြှေးခှငျ့ရတဲ့သူတှဟော အငျမတနျကံကောငျးပါတယျ” ” မာတာပိတု ဥပဋ်ဌာနံ ” မိဘကို ပွုစု လုပျကြှေးခွငျး ဆို တာ မင်ျဂလာ တရား တဈပါး ဖွဈပါတယျ။ ရိုးရိုးလေး အဓိပ်ပာယျဖျောလိုကျမယျ ဆိုရငျ မိဘကို ခဈြခဈြခငျခငျ ရငျးရငျးနှီးနှီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး လေးလေးစားစား ရိုရိုသသေေ ပွုစုနိုငျတာဟာ ကိုယျ့အတှကျ ကွီးပှားရာ ကွီးပှားကွောငျး […]
ဘယျအစိုးရတကျတကျ ကိုယျလုပျမှ ကိုယျစားရတာဆိုသူမြား ဆရာတျော အရှငျဆန်ဒာဓိက မိနျ့ကွားထားတာလေး ဖတျကွညျ့ပါ ….
ဘယျအစိုးရတကျတကျ ကိုယျလုပျမှ ကိုယျစားရတာဆိုသူမြား ဆရာတျော အရှငျဆန်ဒာဓိက မိနျ့ကွားထားတာလေး ဖတျကွညျ့ပါ …. ကိုယျလုပျမှ ကိုယျစားရ မယျ။ မဲသှားပေးစရာမလိုပါဘူး ဆိုတဲ့ သူတှလေညျးရှိတယျ။ သာ မနျအားဖွငျ့ ကွညျ့လိုကျရငျတော့ ဟုတျသလို ထငျရတာပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျလုပျမှ ကိုယျစားရ မယျဆိုတဲ့ စကားကို ခှဲခွမျးကွညျ့ ရငျ လုပျတာရယျ၊ စားတာရယျ နှဈမြိုးရှိတယျ။ အဲဒီတော့ ကိုယျလုပျ သလောကျ အကြိုးခံစားခှငျ့ရဖို့ အလုပျလုပျတဲ့ နရောမှာ […]
အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ.. အသက် ၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့အရွယ်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမှားအယွင်းမဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ် ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာတချို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) လက်မထပ်ပါနဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်က အရမ်းငယ်လွန်းပါတယ်။ ဘဝတက်လမ်းအတွက်လည်း ကြိုးစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရူးမိုက်ပြီးလက်ထပ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအရွယ်က […]
မျက်နှာများတဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အမူအကျင့်မျာ
မိန်းကလေးအများစုက သူတို့ရဲ့ အချစ်ကို တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ပုံအောချစ်တတ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့သောယောက်ျားလေးတွေကတော့ အချစ်တွေဝေမျှရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်သူတွေပါ … သူတို့တွေရဲ့ အချစ်ဟာ အရမ်းကို များပြားလွန်းပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မကျေနပ်နိုင်ပဲ တစ်ခြား သူတွေကိုပါ ဝေမျှတတ်တဲ့ မျက်နှာများသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် …။ မျက်နှာများတဲ့ သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပေမယ့်လို့ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကတစ်ဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာများတဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ ဒီလို အမူအကျင့်တွေ ရှိလို့နေပါတယ် …။ […]
တဈနိုငျငံလုံးထိခိုကျနဈနာစတေဲ့ လုပျကွံ တိုကျခိုကျမှုကွီးတဈခု….
ရေးသင့်ပြီထင်လို့ရေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားသုံးဆီလောကထဲကိုဓာတုအနံ့မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီရောက်တာ 2012 13ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသားလူငယ်တယောက်ဘာသာပြန်နဲ့အတူအိမ်ရောက်လာပြီးနမူနာပုလင်းလေးတွေပြပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ဒါသည်စားသုံးသူကိုလိမ်လည်တာဘဲဖြစ်တယ်မလုပ်သင့်ဘူး လို့ပြောပြပါတယ်။ နောက်ဓာတုအနံ့ဖြစ်လို့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ အနံ့ကပြင်းလွန်းတယ်၊ လို့ပြောပြပါတယ်၊ သူ့ကတော့နမူနာပုလင်းငယ်၎ပုလင်းထားပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်းFDAမှတာဝန်ရှိ သူတဦးကိုပြောပြပြီးနမူနာပုလင်းငယ်များကိုFDAရန်ကုန်ရုံးခွဲကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ဓာတုအနံ့မြေပဲဆီ အတုနှမ်းဆီအတုကတနိုင်ငံလုံးပြန့်လို့နေပါပြီ၊ စားသုံးသူရေးရာမှာ ကျနော်စတင်ပါသည့် 2014 ခုနှစ်ကတည်းက အစည်းအဝေးတက်တိုင်းဒီဓာတုအနံ့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးမှုကတဖြေးဖြေးကြီးလာပါပြီ၊ အချိန်မီတားဆီးပေးဖို့ ပြောရင်းနဲ့ကို2016 17မှာ ဈေးကွက်ရဲ့80%ဖြစ်သွားပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားသုံးဆီဈေးကွက်မှာစားအုန်းဆီ၊နေကြာဆီ၊ပဲပုတ်ဆီတွေပြန်ကြော်ဆီတွေကိုဓာတု အနံ့ပေးမြေပဲဆီအတုနှမ်းဆီအတုလုပ်ရောင်းနေတာကို မတားမြစ်နိုင်တာကစပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံလယ်ယာ ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊စားသုံးသူ ကျန်းမာရေး၊သွင်းကုန်အစားထိုး […]